कोरोना संक्रमणले एकै दिन १ सय ५ जनाको मृत्यु, २ हजार ४८ जना सङ्क्रमित थपिए !
कोरोना संक्रमणले एकै दिन १ सय ५ जनाको मृत्यु, २ हजार ४८ जना सङ्क्रमित थपिए !
एजेन्सी - कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको हुबेई प्रान्तमा आइतबार एकै दिनमा १०० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यद्यपि, यस भाइरसको कारण चीनभर आइतबार १०५ व्यक्तिको मृत्यु भएको चिनियाँ अधिकारीहरुले सोमबार जनाएका छन् । त्यसैगरी आइतबार चीनभरी २ हजार ४८ जना सङ्क्रमित भएका समाचारमा जनाइएको छ । सङ्क्रमितहरुको यो सङ्ख्या चीनको ३९ प्रान्तमा रहेको बताइएको छ ।